Kay oo ka dhawaajiyay Hadal aan u rooneen dhagaha DF Soomaaliya. – idalenews.com
Kay oo ka dhawaajiyay Hadal aan u rooneen dhagaha DF Soomaaliya.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa ka digay in hadii ay sii socdaan dilalka iyo qaraxyada Muqdisho ka dhaca, Safiirada iyo saraakiisha QM isaga bixi doonaan magaalada Muqdisho.
Kay, ayaa ka hadlay dilka shalay Muqdisho loogu geystay Xilibaan Mursal, iyo Xilibaankii doraad ku dhintay qarax loogu rakibay Baabuurkiisa, waxaana masuuliyada dilka labadaas Xilibaan sheegtay ururka Al-shabaab.
“Weerarada lagu dilay Xilibaanada, waxay sababi kartaa in diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ajaanibta ay isaga baxaan Muqdisho” ayuu yiri Kay.
Kay oo ka hadlayay Xaruunta QM ee Washington, ayaa DF ugu baaqay ineey adkeeyaan amaanka Caasimada iyo masuuliyiinta.
Tan iyo markii Muqdisho lagu doortay M/weyne Xasan Shiikh, waxaa Caasimada kusoo qul qulayay diblomaasiyiin reer Galbeed ah, kuwo Carbed iyo kuwo kasocda Dalalka deriska, sidoo kale waxaa Caasimada kusoo qul qulayay ajaanib iyo maalgashadayaal.
Al-shabaab ayaa iyagana halkooda kasii waday beegsiga masuuliyiinta dadka la shaqeeya Doowlada, iyagoo mararka qaar geysta qaraxyoo dhiig badan ku daato.
Laamaha amaanka DF, ayaan ilaa iyo hada sidii larabay howshooda u qabsan, mana jirto qof ay usoo qabteen dilalka xilibaanada iyo qaraxyada Muqdisho ka dhaca.
Bishii June 2013, rag shabaab ka tirsan, ayaa weerar toos ah iyo qaraxyo la beegsaday Xaruunta QM ee Muqdisho.
Mareeykanka ayaa wali Safaarada uu Soomaaliya ku lahaa, waxa uu si KMG ahaan ugu taal Kenya, halka Safaaradaha dalalka UK, Yeman, Turkey, Libya iyo Sudan, ay ku yaalaan Casimada Muqdisho.
Ciidamada Dowladda soomaaliya oo dib u Qabsaday Deynuunaay.
Baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in Xarakada Al Shabaab ay cadow ku tahay Soomaalida oo dhan.